Arsenal Oo Markale Wadahadalo La Furtay Real Si Ay Uga Helaan Odegaard – Garsoore Sports
Arsenal Oo Markale…
Kooxda kubbada-cagta ee Arsenal ayaa markale wadahadalo la billoowday kooxda Real Madrid si ay u helaan saxiixa joogtada ah ee cayaaryahanka khadka dhexe ee reer Norway Martin Odegaard oo xilli-cayaareedkii hore amaah ku qaatay kooxda Waqooyiga London.
Xiddigan, oo kabtan u ah dalkiisa, ayaa amaah ku qaatay Emirates Stadium qeybtii labaad ee xilli ciyaareedkii 2020/21, waxaana uu ahaa mid soo bandhigay qaab cayaareed aad u cajiib ah, in kasta oo Arsenal ay ku dhibtooneysay inay hesho qaab cayaareed joogto ah .
Gunners ayaa xagaagii oo dhan ugaarsanayay xiddig hal abuur leh, Odegaard ayaana mar walba ahaa kan ugu sarreeya liiska rabitaanka Mikel Arteta; oo ay sidoo kale ku jiraan James Maddison iyo Philippe Coutinho.
Coutinho ayaa weli xiiso weyn ka helaya Arsenal, laakiin 90min ayaa ku waramaysa in xiddigan uusan ahayn mid qorshooyinka koowaad ku jira waxaana haatan ay wadahadal la fureen Real Madrid si ay heshiis ugala gaaraan Odegaard – oo Arteta uu si gaar ah u doonayo.
Markii hore waxaa la saadaalinayay inuu sii joogi doono Spain, ma cadda sida uu Odegaard ugu muuqan doono xilli ciyaareedkan kooxda Real Madrid ee uu hoggaaminayo tababaraha cusub Carlo Ancelotti, iyadoo ilo ku dhow ciyaaryahanka ay shaki ka qabaan in la siin doono fursad badan taa beddelkeedana uu doorbidayo inuu ka tago kooxda.